Campus Ambondrona: Nidiran'ny mpianatry ny BDEUM ankeriny
jeudi, 14 décembre 2017 18:14
Nihoa-pefy indray ireo mpianatry ny oniversiten’i Mahajanga mivondrona ao amin’ny BDEUM ny maraina teo ka niditra an-keriny tao amin’ny Bloc 9 izay mbola nohidian’ny oniversite.
Avy any anaty ala manga, izay nivondronan’izy ireo natao toerana nipetrahana nandritra ny roa volana nandroahana azy ireo tamin’ny Bloc no nitaona entana ireto mpianatra ireto nihazo ny Campus. Taoriana kelin’ny nahatafidiran ireo mpianatra no tonga ihany koa ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny OMC Mahajanga niresaka sy nandroaka ireo mpianatra.
Nanazava ny vadin-tany izay avy amin’ny oniversite nidina teny an-toerana nanao fizahana ifotony fa tsy mbola azon’ireo mpianatra atao ny miditra ny faritry ny oniversite raha tsy manao fanambarana ny amin’izany ireo tompon’ andraikitra ary tsy maintsy navoaka ny Campus izy ireo satria mbola "scellé" avokoa ny trano rehetra ary tsy nisy ny fifampiresahana tamin’ireo tompon’ andraikitra ny fidiran’izy ireo tao fa an-keriny.
Ny orana mijojo no antony nahatonga ny fanampahan-kevitra raha ny nambaran’ireo mpianatra satria minia manao be marenina ny oniversite ary manampina maso tsy mijery ny zava-manjo azy ireo sy ny fitakiana ataony, maro amin’ireo mpianatra anefa no marary noho ny tsy fahatomombanana iainan’izy ireo ankalamanjana amin’ny toerana ipetrahany.
Taorian'ny fifampidinihana tamin’ireo mpitandro ny filaminana sy ny vadintany, dia nanaiky nivoaka ny faritry ny oniversite ireo mpianatra saingy kosa mangataka ireo avy amin’ny BDEUM mba hanomezana azy ireo ny Complexe sportif ao Ambondrona hialofany mandra-pahitana vahaolana.